Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 May 2019	• 3 Comments
Omaly dia nahita maso ny haino aman-jery momba ny raharaha Anne Faber isika, izay "niteny ny rain'i Anne". Raha ny tena marina, adihevitra iray no nahazoana ny fangorahana noho ny famongorana zo maro araka izay azo atao avy amin'iny mpamono tena mahatsiravina tahaka an'i Michael P. Tena tezitra mafy tokoa ilay "rain'i Anne" [...]
Michael P. Anne Faber psyop 'Solontenan'ny Solontenan'ny Olana' amin'ny fanjakana bebe kokoa sy ny zon'ny vitsy an'isa
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Martsa 2019	• 18 Comments
Tao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanoritsorako ny antony nahatonga ny raharaha Anne Faber, izay i Michael P. no nanao azy, dia mety ho PsyOp (fiasa ara-tsaina). Asa iray hanosika lalàna bebe kokoa. Ankehitriny dia mipoitra avy amin'ny tsindry ny gidro. Porofon'ny olana lehibe, fanehoan-kevitra, vahaolana amin'ny optima forma. Manangana [...]
Vokatry ny raharaha Anne Faber, araka ny famaritana TBS bebe kokoa tsy misy fikarohana ara-pahasalamana
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Jolay 2018	• 2 Comments
Na dia maro aza ny olona no tsy te zavatra lehibe toy ny an'i Anne sy Michael Faber P. mety ve ny mety ho hetsika ara-tsaina (PSYOP) - mba hanosika amin'ny alalan'ny fepetra vaovao - toa nilaza mialoha tanjon'ny tranga ity dia efa ho avy hatrany taorian'ny tranga niseho. I [...]
Inona no ifandraisan'i Michael P. sy ny business Anne Faber amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany? Maniry ny 1 tapitrisa!
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 15 June 2018	• 6 Comments
Raha tianao ny hamela zavatra manan-danja goavana dia mandeha tsy fantatra, dia tsara foana ny manao izany ho an'ny hetsika goavana. Ny olona efa miasa tamin'izany fisehoan-javatra ka jereo izay mbola mandalo, fa mitsikera dia tanteraka na ampahany. Azonao hazavaina amin'izy ireo [...]
Fihetseham-bahoaka tsy azo ialàna: porofo ADN, ny tatitra momba ny fitsarana an-tsokosoko momba ny Anne Faber sy Michael P. tsy naseho tao anatin'ilay fitoriana
Filed in ANNE FABER	by Martin Vrijland	amin'ny 12 June 2018	• 15 Comments
Efa niaina fitsarana ve ianao, ka ny olona lazaina fa tompon'andraikitra dia tsy misy afa-tsy fotsiny ary voaheloka noho ny fitanisan-keloka? Mazava ho azy fa isika rehetra tsy maintsy mino fa Michael P. dia mahatsiravina mpanolana sy ny mpamono olona sy ny manan-tsaina i Faber Anne fanaovana mitaingina bisikileta tsy manan-tsiny amin'ny alina, rehefa mazava Weather [...]
Nahoana i Anne Faber no nandalo ny scooteran'i Michael P. teo amin'ny làlan'ny fiaramanidina Soesterberg?
Filed in ANNE FABER	by Martin Vrijland	amin'ny 12 June 2018	• 24 Comments
Ny tatitra momba ny fandrenesana momba ny fanolanana sy famonoana an'i Anne Faber dia mampiseho mazava tsara fa i Michael P. (Panhuis) dia nanery an'i Anne hipetraka amin'ny scooter. (Vakio ity fanovana / fanitsiana ity ao amin'ny tantara). Eto izy no nametraka ny fiarovan-dohany teo amin'ny tànany sy ny tanany [...]
Ny tranga marobe ao amin'ny raharaha (mason) Michael P. manodidina ny raharaha Anne Faber
Filed in ANNE FABER	by Martin Vrijland	amin'ny 11 June 2018	• 16 Comments
Sarotra ny tsy tonga mivantana amin'ny fitsarana ary noho izany dia tsy maintsy ataoko amin'ny hafatra twitter avy amin'i Saskia Belleman van de Telegraaf. Raha mijanona any ivelany aho ary tsy afaka mitazona ny saran-dàlana amin'ny dia, izany no hany lalana. Nefa ihany [...]
Anne Faber eo aloha Telegraaf, aiza ny namana Nathan Fidder ary iza ireo namana voalaza anarana ireo?
Filed in ANNE FABER	by Martin Vrijland	amin'ny 2 June 2018	• 17 Comments
Fanentanana mampiady hevitra momba an'i Anne Faber izay toa navotsotra androany, nanipika mazava tsara ny hevitra fa azo atao ny mifototra amin'ny psyop. Fa izay mamaky ilay lahatsoratra avy amin'ny gazety Telegraaf ankehitriny, dia hahita zavatra vitsivitsy. Tsy misy filazalazana momba ny [...]
Taorian'i Anne Faber dia nalevina, avy eo nopotehina, tampoka dia nalevina. Fahadisoan'ny rainy Wim Faber?
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 May 2018	• 9 Comments
Afaka solafaka eo amin'ny fanaovan-gazety Oliravina, fa amin'ny raharaha lehibe toy izany ho toy ny zavatra Faber Anne toa vita fa hampifangaro ny fandevenana amin'ny fandoroana faty. Ankehitriny isika dia afaka milaza fa ny Telegraph ka manao fahadisoana matetika, fa amin'ny fanjavonana tranga toy ny an'i Anne Faber toa ahy misy tanteraka [...]
Nanambara ny famonoana an'i Anne Faber i Michael P.: vaovao diso na zava-misy?
Filed in ANNE FABER	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Janoary 2018	• 24 Comments
Omaly dia nitatitra ny fampahalalam-baovao fa i Michael P. (izay mahalala ankehitriny fa ny P ho an'ny Panhuis amin'izao fotoana izao) dia nanambara am-pahibemaso ny famonoana an'i Anne Faber. Mety hivoaka tampoka mandritra ny fivorian'ny pro forma izany. Ity dia tsy navoaka teo aloha, tsy mifanaraka amin'ny fizotran'ny fisokafana fa [...]
Pejy manaraka »
VISITORS NAONY JULY 2017
Total visits: 14.663.951
Nanoro hevitra ny hanolo-tsaina hanangana toby fanabeazana indray ny mpanolotsaina ara-politika!
Ny fanerena ananan'ny ankizy dia lehibe!
Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao
Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoana UNN 2030
Ny teknolojia marani-tsaina sy fitantanana manerantany teknolojia dia hamonjy ny toetrandro
Zonnetje op Nanoro hevitra ny hanolo-tsaina hanangana toby fanabeazana indray ny mpanolotsaina ara-politika!
Camera 2 op Ny fanerena ananan'ny ankizy dia lehibe!
Martin Vrijland op Nanoro hevitra ny hanolo-tsaina hanangana toby fanabeazana indray ny mpanolotsaina ara-politika!
guppy op Nanoro hevitra ny hanolo-tsaina hanangana toby fanabeazana indray ny mpanolotsaina ara-politika!